VaRoma 10 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Tsamba kuvaRoma 10:1-21
Zvingaitwa nemunhu kuti awane kururama kwaMwari (1-15)
Kuzivisa pachena (10)
Kudana pana Jehovha kunoreva ruponeso (13)
Tsoka dzakanaka dzevaparidzi (15)
Mashoko akanaka anorambwa (16-21)
10 Hama, chido changu mumwoyo mangu uye chikumbiro changu kuna Mwari, ndechekuti ivo vaponeswe.+ 2 Nekuti ndinovapupurira kuti vanoshingaira kushumira Mwari,+ asi havazviiti vachinyatsomuziva zvakarurama. 3 Nekuti nekusaziva kwavo kururama kwaMwari,+ vachitsvaga kuita zvavanofunga ivo vega+ kuti ndizvo zvakarurama, havana kuzviisa pasi pekururama kwaMwari.+ 4 Nekuti Kristu ndiye mugumo weMutemo,+ kuti munhu wese anotenda ave nekururama.+ 5 Nekuti Mozisi anonyora nezvekururama kunounzwa neMutemo achiti: “Uchaita kuti munhu anouchengeta ararame.”+ 6 Asi kururama kunobva mukutenda kunoti: “Usati mumwoyo mako,+ ‘Ndiani achakwira kudenga?’+ kureva kuti, kuti aburutse Kristu, 7 kana kuti, ‘Ndiani achadzika mugomba rakadzikadzika?’+ kureva kuti, kuti amutse Kristu kuvakafa.” 8 Asi rugwaro runoti kudii? Runoti, “Shoko racho riri pedyo newe, mumuromo mako nemumwoyo mako”;+ kureva, “shoko” rekutenda, ratiri kuparidza. 9 Nekuti kana uchizivisa pachena nemuromo wako kuti Jesu ndiShe,+ uye uchitenda mumwoyo mako kuti Mwari akamumutsa kuvakafa, uchaponeswa. 10 Nekuti munhu anotenda nemwoyo kuti awane kururama, asi anozivisa pachena+ nemuromo kuti awane ruponeso. 11 Nekuti rugwaro runoti: “Hapana anotenda maari achaodzwa mwoyo.”+ 12 Nekuti hapana musiyano pakati pemuJudha nemuGiriki.+ Kuna Ishe mumwe chete wevanhu vese, anopfumisa vese vanomudana. 13 Nekuti “munhu wese anodana zita raJehovha* achaponeswa.”+ 14 Asi vachamudana sei kana vasingatendi maari? Uyewo, vachatenda sei maari ivo vasina kunzwa nezvake? Uyewo, vachanzwa sei kana pasina mumwe munhu anoparidza? 15 Uyewo, vachaparidza sei kana vasina kutumwa?+ Sekunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Dzakanaka sei tsoka dzevaya vanozivisa mashoko akanaka ezvinhu zvakanaka!”+ 16 Kunyange zvakadaro, havasi vese vakateerera mashoko akanaka. Nekuti Isaya anoti: “Jehovha,* ndiani akatenda zvaakanzwa kwatiri?”+ 17 Saka kutenda kunouya kana munhu anzwa shoko.+ Uyewo, shoko racho rinouya panoparidzwa nezvaKristu. 18 Asi ndinobvunza kuti, Mashoko acho havana kuanzwa here? Chokwadi ndechekuti, “inzwi racho rakasvika munyika yese, uye mashoko acho akasvika kumagumo enyika.”+ 19 Asi ndinobvunza kuti, VaIsraeri vakanga vasingazivi here?+ Kutanga Mozisi anoti: “Ndichaita kuti muve negodo ndichishandisa vanhu pasina; ndichaita kuti muviruke nehasha ndichishandisa rudzi rune mapenzi evanhu.”+ 20 Asi Isaya anozonyatsobuda pachena achiti: “Ndakawanikwa nevaya vakanga vasiri kunditsvaga;+ ndakazivikanwa nevaya vakanga vasingabvunzi nezvangu.”+ 21 Asi anoti nezvaIsraeri: “Ndakaita zuva rese ndakatambanudzira maoko angu kuvanhu vasingateereri uye vakaoma musoro.”+